Mpanamboatra vokatra sy rindranasa - Mpamatsy vokatra sy orinasa mpamatsy entana any Shina
(120kW) Nebula All-in-one Charger DC ivelan'ny birao
Fehiny: Nebula All-in-one Off-board DC charger dia fitaovana manampy amin'ny famoahana bateria fiara elektrika. Ny singa fototra dia misy: ny herinaratra, ny fanaraha-maso, ny refy fandrefesana, ny seranan-tsambo, ny angovo fampitana herinaratra ary ny fifandraisana amin'ny solosaina-olombelona. Amin'ny fanajana fatratra ny fenitra indostrialy, tonga hatrany amin'ny IP54 ny haavon'ny fiarovana ny charger. Ho fanampin'izany, ny fiasan'ny fiarovana tsy manam-paharoa hery fiarovana an-tseranana an-tseranana dia afaka mahatsapa fanandramana bateria haingana amin'ny fiara vaovao ...
(180kW / 240kW) Charger Nebula All-in-one Off-board DC
Rafitra fanamarinana angovo / famoahana angovo ho an'ny angovo bateria herinaratra (azo entina)
Ity dia rafitra fanamboarana sela voalanjalanja bateria izay manambatra ny fiampangana, ny fanamboarana, ny fivoahana ary ny fampahavitrihana. Izy io dia afaka manatanteraka ny fanamboarana sela hatrany amin'ny tadin'ny bateria fitaovana 40 herinaratra, fonosana bateria bisikileta ary modely EV.
Nebula bateria Nebula Formation feedback & Grading Tester
Ity vokatra ity dia rafi-pandrefesana angovo sela manan-tsaina & rafitra fitsapana grady, izay ampiasaina indrindra amin'ny famolavolana sela hery, naoty na fitsapana ny fiainana tsingerina.
Power Battery Pack End-of-Line Testing System dia natao hanandramana bateria hery lehibe.
Rafitra fanandramana Nebula PCM ho an'ny bateria finday & vokatra nomerika Li-ion
Fitsapana haingana amin'ny fitsapana toetra fototra sy fiarovana an'ny PCM misy vahaolana 1 tariby ao anaty kitapo bateria 1S & 2S Li-ion.
Ny rafitra bateria herinaratra fonosana miasa dia namboarina manokana mba hitsapana bateria, motera, fanaraha-maso elektronika ny Electric Vehicle. Ampiasaina be izy amin'ny fitsapana kitapo bateria lithium, fitsapana super capacitor, fitsapana fampisehoana moto ary sehatra fitsapana hafa.
Ity dia rafitra fitsapana PCM bateria Li-ion, izay azo ampiharina amin'ny fanandramana mitambatra (toy ny fitsapana toetra fototra sy fiarovana sns) an'ny kitapo bateria 1S-120S BMS miaraka amina modely LMU sy BMCU.
Tester momba ny famoahana hetra
Ity dia rafitra fitsapana herinaratra mifehy ny solosaina sy ny angovo momba ny angovo ampiasaina indrindra amin'ny fitsapana fahombiazan'ny herinaratra amin'ny bateria ambaratonga faharoa avo lenta, fiara ary bateria angovo fitehirizana angovo.
Fitsapana famoahana bateria, Tester mamoaka fahaizan'ny bateria 48v, 18650 Tester, Testeran'ny fahafahan'ny famoahana bateria, Fitaovana fitsapana mandeha ho azy bateria, Fitaovana fitsapana bateria,